အောင်ဘာလေထီ Archives - ShwengweGames
ကိုယ့်ဆီမှဆုကြီးဆွတ်ခူးသွားတဲ့သားငယ်လေးပါ အရမ်းနဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဆွာမြို့ရဲ့ကျပ်သိန်း2000ကံထူးရှင်သား‌ငယ်လေးကညင်အိုင်‌ကျေးရွာမ မောင်ဘုန်းမင်းခန့်ပါရှင့်။
ကိုယ့္ဆီမွဆုႀကီးဆြတ္ခူးသြားတဲ့သားငယ္ေလးပါ အရမ္းနဲ႔ဝမ္းသာမိပါတယ္။ဆြာၿမိဳ႕ရဲ႕က်ပ္သိန္း2000ကံထူး႐ွင္သား‌ငယ္ေလးကညင္အိုင္‌ေက်း႐ြာမ ေမာင္ဘုန္းမင္းခန္႔ပါ႐ွင့္။
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်စေဖို့ဘဝနေနည်း နည်းလမ်း ( ၁၀ )မျိုး
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်စေဖို့ဘဝနေနည်း နည်းလမ်း ( ၁၀ )မျိုးကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ
( ၁ ) ဘယ်တော့မှ ပိုက်ဆံမချေးပါနဲ့ ။ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုရှိတယ် ။
တောင်းမှပေးတာ လူမိုက်၊မတောင်းဘဲပေးတာ လူလိမ္မာ၊တောင်းလည်းမပေးတာလူယုတ်မာဒါ့ကြောင့် ပြင်ပဘေးသူစိမ်းတွေနဲ့
ငွေကြေးဥစ္စာဟာနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေ ချေးငှားကြသူတိုင်းဟာ ပြန်ပြီးလိုချင်ကြစမြဲပါ ။ပြန်မဆပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရင်ထဲမှာ အစိုင်အခဲလေးတည်နေတတ်ပါတယ် ။ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ရက်ရက်ရောရောသာ ပေးကမ်းကူညီပေးလိုက်ပါ။
( ၂ )လိုအပ်လျှင်အဆင်သင့်ဖြစ် အောင်ပိုက်ဆံပုံမှန်စုပါ ။
ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အခက်အခဲတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြေရှင်းဖို့ ပိုက်ဆံစုပါ ။
( ၃ ) ကိုယ့်ဘ၀အတွက်မလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့ ။
ကိုယ့်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ဖူးသူတွေလို အပ်မှ ကိုယ့်ကိုတမ်းတမ်းတတဖြစ်တတ်ကြသူတွေအတွက်လုံး၀အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့ ။တစ်ချို့တွေတော့ရှိတယ်”ငါကသူ့အတွက်အမြဲတမ်းပေးဆပ်ဖို့အဆင့်ပဲ” တဲ့။
ဒါဟာသေချာတွေးကြည့်ရင် စိတ္တဇဝေဒနာသည်တစ်ယောက်ရဲ့အတွေးမျိုးပါ၊ချီးကျူးထိုက်ဖို့နေနေသာသာလုံး၀ ဂုဏ်ယူစရာမကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးပါပဲ ။ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တဲ့သူအတွက် အပင်ပန်းခံနေမဲ့အစားပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ အချိန်ကုန်ခံလိုက်ပါ။
( ၄ )ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားဆက်ဆံတတ်ပါစေ ။
ကိုယ်ကကောင်းသလောက်ကိုယ့်အပေါ် မကြာခဏ လူလည်ကျတတ်သူတွေကို တလေးတစား ဆက်ဆံနေဖို့ လုံး၀ မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ သူတို့အနိူင်ယူဖူးတဲ့သူအပေါ် နောက်တစ်ကြိမ်ယုတ်မာဖို့ ဘယ်တော့မှ ၀န်လေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
သူက ပြုံးရင် ကိုယ်ကပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါ သူက မဲ့ရင် ကိုယ်ကပြန်မဲ့ပြလိုက်ပါသူကမီးလိုကျင့်ရင် ကိုယ်ကမီးလိုပူလောင်ပြလိုက်ပါသူကရေလိုကျင့်ရင် ကိုယ်ကရေလိုအေးချမ်းပြလိုက်ပါ
( ၅ ) စိတ်တူကိုယ်တူ အသိမိတ်ဆွေများနှင့် စကားများများပြောပါ။
သင့်ကို လေးစားတဲ့သူ ၊ သင်ကလည်း လေးစားတဲ့သူများနှင့် မကြာခဏ စကား ပြောပါ ။ဒီလို စကားပြောခြင်းဖြင့် စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရစေပြီး အချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်နေတာကို သတိမထားမိအောင် ကြည်နူးစရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ် ။
နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက် ၊လက်ရှိအခြေအနေ ၊ အနာဂတ်အလားအလာ စတာတွေအတွက် သင်နဲ့စိတ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုက်သူများကသာ အကြံ ဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိူင်ပါလိမ့်မယ် ။ဆိုလိုတာက သင်က ဘာသာရေးသမားဆိုရင် အရက်သမားတွေနဲ့ စကားပြောလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
( ၆ ) ခရီးတွေ မကြာခဏ ထွက်ပါ ။
တိုတောင်းလှတဲ့ဘ၀မှာ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ခံစားဖို့နဲ့အထွေ ထွေဗဟုသုတ ( General knowledges ) မြင့်မားစေဖို့ မကြာခဏ ခရီးထွက်သင့်ပါတယ် ။
ခရီးသွားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး စိတ်အပန်းဖြေမှုတစ်မျိုးဆိုတာ သင်လက်ခံလာပါလိမ့်မယ် ။ရေမြေတောတောင်သဘာ၀အလှတွေကို ရှုစားရခြင်းဟာလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုတစ်မျိုးပါပဲ။
ခရီးထွက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ pressure တွေကိုလည်း အတော်အသင့် လျော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ် ။
( ၇ ) ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲ လုပ်ပါ ။
ကျွန်တော် စာတစ်ကြောင်း ဖတ်ဖူးခဲ့တယ် ။If you don’t like where you are , move .You are notatree .
မင်းနေတဲ့နေရာကိုမကြိုက်ရင်ပြောင်းလိုက်မင်းက သစ်ပင်တစ်ပင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတွေပါ ။ရွေ့လျားလို့မရတဲ့သစ်ပင်တွေမဟုတ် ပါဘူး ။
ဒါ့ကြောင့် ခဏတာရခဲလှတဲ့ဒီဘဝလေးမှာ ကိုယ်သဘောမကျတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်း စိတ်ညစ်ညူးမခံပါနှင့်။
” ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်ဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး အောင်မြင်သူ ဖြစ်ရတာထက် ကျုပ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး မအောင်မြင်သူဖြစ်ချင်တယ် ” တဲ့ ။
ဟုတ်ကဲ့ —ကိုယ်အမှန်တကယ် ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါ ။
( ၈ ) တစ်ဖက်လူဘက်မှ ဖြည့်တွေးပေးပါ ၊ ကိုယ်ချင်းစာ စိတ် ထားပါ ။
ပြဿနာတစ်ခုကို ကိုယ်မြင်တဲ့ဘက်ကလည်း မှန်နိူင်သလို သူမြင်တဲ့ဘက်ကလည်းမှန်နေနိူင်ပါတယ် ။
သဘောထားကွဲလွဲတာဟာ အဓိကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါ့ကြောင့် တစ်ဖက်လူအမြင်ကိုလည်း လေးစားတတ်ဖို့ သိပ်ကို လိုအပ်ပါတယ် ။
သူ့နေရာမှငါသာဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကို တွေးတတ်ဖို့အမြဲတမ်းသင်ယူထားပါ ။
သူ့ဘက်ကကြည့်တော့ လက်ဖဝါး ငါ့ဘက်ကကြည့်တော့ လက်ဖမိုးဆိုသလို အမှန်တရားတစ်ခုဟာ အမြင်အမျိုးမျိုးရှိနေတတ်ပါတယ် ။
( ၉ ) စာများများဖတ်ပေးပါ ။
ဦးသန့်ရဲ့စကားလေးနဲ့ပဲ ပြောပါရစေ ။”စာဖတ်သောလူမျိုးသည် တိုးတက်၍ တိုးတက်သောလူမျိုးသည် စာဖတ်သည် ” တဲ့ ၊သိပ်ကို မှန်ပါတယ် ။
သင်သာစာဖတ်ခြင်းမှာ စျန်၀င်နေရင် အခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို ရောက်ရှိသွားသလိုခံစားမိမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေ တိုးတက်မြင့်မားစေဖို့ အသိဉာဏ်ပညာတွေ တိုးပွားစေဖို့အတွက်စာဖတ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ ။
( ၁၀ ) တစ်စုံတစ်ရာကို အမြဲတမ်းသင်ယူပါ
ဥရောပနိူင်ငံတွေမှာဆိုရင် အသက် ၈၀ အရွယ်အဘိုးအဘွားတွေဟာဘာသာစကားအသစ်တွေကအစအသိပညာအတတ်ပညာတွေသင်ယူလေ့လာနေတုန်းပါပဲ ။
တစ်စုံတစ်ရာကိုအမြဲတမ်း သင်ယူနေတတ်တာဟာ သူတို့ရဲ့ ဓလေ့တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ ။
ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုကို စိတ်ပါလက်ပါ သင်ယူပါအတတ်ပညာတစ်မျိုးမျိုးကို ထူးချွန်အောင် လေ့လာပါ
၁၈ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် စ/ဆုံး တိုက်ရန်
၁၈ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် စ/ဆုံး
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ဆု
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ဆု
ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု
(ဒ ၉၉၉၆၀၃) (ဎ ၅၀၂၉၃၈)
ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၆) ဆု
(ရ ၅၁၂၆၁၉) (ရ ၂၁၇၈၃၅) (ဟ ၃၁၂၄၁၀)
(သ ၆၅၀၁၇၁) (ဟ ၉၅၉၈၅၇) (ဍ ၆၉၅၉၃၀)
ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၇) ဆု
(ဏ ၄၀၁၉၇၇)(မ ၆၇၄၇၇၀)(လ ၇၃၃၁၂၁)(ကက ၁၅၅၀၇၉)(ဆ ၈၇၅၇၄၉) (ကက ၇၆၀၈၈၆) (ဇ ၅၄၉၂၃၃)
ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၂၀) ဆု
(ရ ၂၀၃၁၃၇)(ဍ ၉၃၈၈၃၃)(ဌ ၂၉၉၇၈၉)(ဍ ၇၃၆၆၉၀)(သ ၉၃၅၈၃၄)(တ ၂၈၂၁၈၅)(ဌ ၅၉၃၁၅၉)(ဂ ၂၉၉၀၁၇)(ကဆ ၇၇၉၄၆၄)(ခ ၂၁၇၅၉၄)(ဘ ၉၅၀၃၀၇)(ကဂ ၄၀၃၃၈၆)(ဘ ၅၀၇၁၁၉)(ဂ ၄၈၂၈၁၀)(ဟ ၆၆၂၅၃၇)
(ဆ ၉၁၄၈၀၃)(မ ၆၇၈၁၁၁)(ည ၇၉၅၃၆၇)(ဃ ၈၅၀၆၅၉)(တ ၇၃၄၈၀၃)
ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး (၂၃) ဆု
(ထ ၂၁၇၄၂၆)(မ ၈၈၀၆၁၈)(ည ၁၅၉၃၀၈)(ဌ ၈၆၇၇၇၇)(ဝ ၅၄၀၁၃၀)(ဍ ၅၄၈၆၁၄)(ဃ ၄၆၆၄၅၇)(က ၄၅၄၉၈၂)(ဋ ၁၁၅၂၇၄)(စ ၃၁၁၆၈၂)(အ ၄၆၁၁၈၈)(ထ ၃၃၄၂၄၇)
(ဂ ၉၅၇၄၀၇)(ဆ ၈၆၂၇၅၀)(ဗ ၆၄၅၆၁၈)(အ ၈၁၆၀၅၁)(ဋ ၈၄၃၀၁၀)(န ၃၁၄၄၈၇)(စ ၇၉၅၅၇၅)(ဖ ၉၉၉၀၇၈)(ဘ ၅၉၃၃၇၂)(ဆ ၈၇၉၂၄၇)(ရ ၉၅၂၂၅၁)
ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး (၂၇) ဆု
(ဘ ၆၇၆၁၇၂)(ဗ ၁၇၈၃၅၇)(ဓ ၃၉၉၂၀၅)(ဒ ၆၈၁၅၇၈)(ဒ ၂၂၄၆၁၀)(ထ ၅၇၂၉၀၈)(မ ၁၉၉၆၀၂)(ကဂ ၆၂၃၉၅၁)(ဆ ၁၀၈၉၅၂)(ဝ ၄၂၆၀၁၉)(သ ၂၂၄၆၇၇)(တ ၆၅၇၂၆၄)(ဈ ၆၅၆၈၆၂)(ကင ၇၀၇၇၈၀)(ကင ၂၁၁၈၈၈)
(ဗ ၁၅၆၀၆၂)(ခ ၄၉၃၃၄၂)(ည ၅၃၅၆၁၅)(င ၈၄၃၅၀၂)(င ၇၀၁၂၆၆)(လ ၄၅၃၉၆၃)(န ၄၆၃၂၉၅)(အ ၈၅၄၅၃၃)(ဌ ၃၃၈၁၈၉)(ကစ ၅၃၈၇၃၄)(ကခ ၁၄၂၃၇၇)(ဟ ၄၉၉၀၈၃)
ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုကြီး (၃၀) ဆု
(ကခ ၈၃၃၈၂၀)(ဗ ၁၉၉၇၄၄)(န ၈၄၄၃၇၄)(ဂ ၅၀၄၀၁၄)(ဋ ၅၃၉၀၀၂)(ဝ ၆၄၅၃၄၂)(ဈ ၂၁၆၉၄၄)(ဗ ၉၉၈၆၁၁)(ဒ ၈၂၄၆၉၅)(စ ၅၁၈၁၈၁)(ဌ ၅၈၈၃၁၇)(ကက ၁၃၇၄၅၅)(ရ ၃၆၃၄၀၆)(ထ ၂၁၃၅၅၀)(ဋ ၅၃၉၅၆၂)
(ဎ ၃၆၉၉၇၀)(သ ၄၅၃၁၂၉)(လ ၃၈၉၃၆၈)(ထ ၇၈၆၂၂၂)(ဂ ၁၆၆၈၆၁)(င ၅၄၄၀၀၆)(ဘ ၂၀၁၅၀၄)(ရ ၉၇၄၅၁၃)(ဓ ၁၈၈၀၄၈)(သ ၈၈၇၀၀၀)(ဍ ၆၀၀၄၈၆)(ဂ ၆၂၄၁၉၄)(ကဆ ၃၃၅၂၇၃)(ဓ ၇၁၁၄၅၆)(ဈ ၃၁၄၂၁၁)
ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီး (၃၄) ဆု
(ဎ ၇၉၅၃၂၂)(န ၆၅၂၅၅၀)(ပ ၆၁၅၂၀၁)(ဘ ၃၆၇၈၆၉)(ဝ ၇၃၀၄၅၁)(ဂ ၃၄၃၇၇၂)(ရ ၇၉၇၇၂၅)(ဆ ၃၉၃၇၁၇)(ဓ ၂၁၅၉၇၅)(ဟ ၉၄၁၆၁၁)(ဍ ၃၆၇၂၀၃)(တ ၇၀၈၅၀၃)(ကခ ၅၄၈၈၁၈)(တ ၁၅၃၉၈၃)(လ ၉၇၆၄၉၂)(ဝ ၂၉၇၆၆၀)(င ၁၅၆၂၅၈)(ထ ၅၃၇၅၈၃)(ဠ ၇၃၃၅၀၅)(ဈ ၁၈၈၄၅၈)(အ ၉၂၇၂၄၆)(င ၃၂၇၀၀၀)(မ ၁၃၁၃၅၆)(ဎ ၇၂၃၂၆၇)(ဎ ၈၆၆၁၂၉)(င ၉၆၁၂၆၉)(ထ ၂၂၁၁၀၁)(ခ ၁၈၂၄၁၈)(ဏ ၁၈၆၃၄၈)(ကစ ၂၄၀၀၉၈)(ကစ ၅၁၆၇၀၂)(ဆ ၅၄၈၉၆၈)(ပ ၄၄၇၀၈၀)(ဆ ၆၁၅၆၁၅)
ကျပ် ၁၀ သိန်းဆုကြီး (၄၇) ဆု
(ကခ ၃၆၇၄၉၆)(ဝ ၄၂၃၀၄၁)(ဃ ၆၈၆၉၅၆)(ပ ၂၅၀၆၉၂)(ဆ ၆၅၅၈၉၇)(န ၂၅၅၂၀၇)(ဏ ၇၂၉၃၆၆)(ဒ ၃၆၃၇၄၆)(ဗ ၇၅၈၉၉၉)(အ ၈၀၉၀၇၁)(ဃ ၉၄၁၀၁၆)(စ ၄၉၉၅၀၄)(ဏ ၅၉၂၃၉၆)(အ ၂၄၈၇၈၂)(ပ ၂၅၀၁၃၂)
(ယ ၂၂၈၈၉၄)(ဟ ၄၈၃၁၂၁)(ဋ ၃၆၉၅၅၆)(ဏ ၇၆၁၄၀၆)(ဟ ၃၂၁၄၁၃)(ခ ၈၉၉၄၄၈)(ဗ ၅၅၉၉၉၉)(ဌ ၄၁၂၃၂၇)(လ ၇၈၂၁၀၂)(ဟ ၂၈၃၃၇၆)(ဃ ၂၁၆၄၆၇)(ဟ ၆၅၅၄၄၃)(မ ၄၁၇၀၅၀)(ဒ ၆၁၀၁၀၀)(န ၁၆၃၂၂၈)(ဝ ၉၈၅၉၁၇)(ကဆ ၂၂၂၄၈၉)(င ၅၈၆၁၇၃)(မ ၄၀၄၆၅၀)(ပ ၄၂၃၂၁၇)(ဂ ၈၃၅၃၈၇)(ဍ ၅၆၈၄၆၉)(န ၄၅၂၉၀၉)(ပ ၄၂၆၃၂၁)(ခ ၄၃၈၀၈၀)(ယ ၅၇၃၆၀၄)(ကင ၈၉၆၈၂၇)
(ကခ ၆၂၈၄၆၇)(ဝ ၁၉၉၀၁၄)(ကင ၂၉၅၇၄၃)(ကက ၈၅၄၅၃၆)(ဖ ၄၈၉၄၁၄)
💗ဝေဝေဆောဆာ ပဒေသာ ဆုမဲများ💗
ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၁၇) ယူနစ်
(ကဃ ၇၄၄၇၇)(ဗ ၂၈၉၇၁)(ရ ၈၈၀၆၀) (သ ၈၁၄၉၃)(ဈ ၃၁၃၁၃)(ဠ ၃၆၈၈၈)(က ၁၆၇၄၀)(င ၇၆၃၆၆)(ကဆ ၈၂၃၇၅)(က ၂၀၄၆၆)(ကခ ၈၃၁၃၉)(ကဆ ၈၀၁၄၇)(စ ၈၉၃၀၁)(ဏ ၃၉၆၉၁)(ဋ ၈၅၇၄၈)(ကဂ ၉၃၀၆၄)
ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၁၇) ယူနစ်
(ဓ ၁၅၃၃)(ဏ ၉၁၃၇)(ဈ ၆၅၅၄)(ဓ ၆၈၀၆)
(ကဂ ၃၀၈၂)(ဗ ၃၉၄၇)(ရ ၃၉၉၉)(ဍ ၁၂၈၁)
(ဒ ၉၃၅၇)(ဖ ၉၄၈၉)(ည ၈၉၁၀)(ကဆ ၇၄၂၈)
(ဃ ၁၉၂၁)(ကဃ ၂၀၂၅)(ဝ ၅၀၈၀)(ကဆ ၇၆၈၁)(ဓ ၄၈၈၀)
ကျပ်တစ်သိန်းဆု (၂၁) ယူနစ်
(ဓ ၇၈၀)(က ၁၅၅)(ဋ ၆၉၅)(ဎ ၄၇၄)(သ ၇၃၉)(အ ၃၃၈)(ဠ ၁၁၁)(ဋ ၇၄၈)(ယ ၆၅၅)(ဓ ၆၇၄)(ဏ ၉၄၈)(ကဃ ၈၉၃)(ကဃ ၅၀၁)(ည ၇၉၀)(ဏ ၇၅၄)(စ ၁၅၅)(ကဂ ၉၉၇)(ကဂ ၁၈၅)(ဠ ၇၇၂)(ဘ ၈၀၆)(ကက ၅၄၈)
ကျပ်ငါး​သောင်းဆု (၂၀) ယူနစ်
(န ၆၃)(ဗ ၄၆)(ဏ ၉၃)(ဍ ၆၆)(ဃ ၃၅)(ကဆ ၂၁)
(ည ၉၁)(ဆ ၆၅)(ဎ ၉၆)(ဌ ၄၀)(ခ ၂၀)(ဝ ၃၃)
(ဆ ၉၄)(ကဆ ၉၉)(ည ၉၅)(ဋ ၈၄)(ဍ ၉၇)(ဝ ၈၅)(ဝ ၄၈)(ည ၁၁)
ရွှေမြန်မာ မဟာအောင်ကုဋေဟိန်း ပင်ရင်းထီဆိုင်မှ (၁၈)ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုကြီးကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်
ရွှေမြန်မာ မဟာအောင်ကုဋေဟိန်း ပင်ရင်းထီဆိုင်ကနေ ကိုယ်စားလှယ်ယူရောင်းတဲ့သူထံကနေတစဆင့် ကံထူးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကံထူးရှင်က တာမွေမြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကိုကျော်စွာတို့ မိသားစုဖြစ်ပြီး ကံထူးနံပတ် ကဃ-၆၄၃၄၂၅နံပတ်နဲ့ ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဆီကနေပေါက်တာ။ခုတော့အဲဒီကိုယ် စားလှယ်နဲ့ ကံထူးရှင်သွားတွေ့နေပြီပြောတယ်။ ကံထူးရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာအချက်အလက်မှတော့မသိရသေးဘူး။ သိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ထီဆိုင်ကြီး pageကနေလည်း ကြေညာပေးမှာပါ” လို့ ရွှေမြန်မာ မဟာအောင်ကုဋေဟိန်း ထီဆိုင်မိသားစုမှ Duwun ကိုပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ကံထူးရှင်မိသားစုက တာမွေမှနေထိုင်တဲ့အကြောင်းကလွဲလို့ ဘာမှမသိရှိရသေးပါဘူး။
(၁၈)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲမှာဆိုရင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတဲ့ ဆုကြေးငွေ ကျပ်သန်း (၂၅၀)ကို ၁၀သိန်းဆု (၄) ဆု၊ ၃သိန်းဆု (၂၀)ဆု ၊ ၂သိန်းဆု (၂၀၀)ဆုနဲ့ ၁သိန်းဆု (၂၀၀၀)ဆု၊ စုစုပေါင်း ဆုမဲပေါင်း (၂၂၂၄)ကိုလည်း ထပ်မံတိုးမြှင့် ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။
ေ႐ႊျမန္မာ မဟာေအာင္ကုေဋဟိန္း ပင္ရင္းထီဆိုင္မွ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆုႀကီးကံထူးရွင္ ထြက္ေပၚ
ေ႐ႊျမန္မာ မဟာေအာင္ကုေဋဟိန္း ပင္ရင္းထီဆိုင္ကေန ကိုယ္စားလွယ္ယူေရာင္းတဲ့သူထံကေနတစဆင့္ ကံထူးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ကံထူးရွင္က တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ကိုေက်ာ္စြာတို႔ မိသားစုျဖစ္ၿပီး ကံထူးနံပတ္ ကဃ-၆၄၃၄၂၅နံပတ္နဲ႕ ဆြတ္ခူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
“ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆိုင္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ဆီကေနေပါက္တာ။ခုေတာ့အဲဒီကိုယ္ စားလွယ္နဲ႕ ကံထူးရွင္သြားေတြ႕ေနၿပီေျပာတယ္။ ကံထူးရွင္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘာအခ်က္အလက္မွေတာ့မသိရေသးဘူး။ သိတာနဲ႕ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထီဆိုင္ႀကီး pageကေနလည္း ေၾကညာေပးမွာပါ” လို႔ ေ႐ႊျမန္မာ မဟာေအာင္ကုေဋဟိန္း ထီဆိုင္မိသားစုမွ Duwun ကိုေျပာပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ ကံထူးရွင္မိသားစုက တာေမြမွေနထိုင္တဲ့အေၾကာင္းကလြဲလို႔ ဘာမွမသိရွိရေသးပါဘူး။
(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲမွာဆိုရင္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိတဲ့ ဆုေၾကးေငြ က်ပ္သန္း (၂၅၀)ကို ၁၀သိန္းဆု (၄) ဆု၊ ၃သိန္းဆု (၂၀)ဆု ၊ ၂သိန္းဆု (၂၀၀)ဆုနဲ႕ ၁သိန္းဆု (၂၀၀၀)ဆု၊ စုစုေပါင္း ဆုမဲေပါင္း (၂၂၂၄)ကိုလည္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာပါ။
သြဂုတ်လ ၁ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် – (၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ပေါက်စဉ် တိုက်ရန်
၁၈ ကြိမ် ထီပေါက်ဂဏန်းများ
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၃)သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၂)သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၁)သိန်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ်(၅)သောင်းဆု (အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်။)
နိုင်ငံတော်မှာမထုတ်ဆုံးဆုပါ။ထီတိုက်နိုင်အောင် like shareပါ။ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးသေးပါ။ထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွက် နေ့သားအလိုက်အကျိုးပေးအောင်ဘာလေထီဂဏန်းများနှင့် ထီထိုးရမည့်အချိန်အပိုင်းအခြား
July 20, 2020 by Shwengwe Games
” ထီထိုးတဲ့သူတိုင်း ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ”
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – အိမ်ရဲ့ဧည့်ခန်းမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ တနင်္ဂနွေသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ …။ ကြက်ဥကြော်စားပြီးထိုးပါ …။ တနင်္ဂနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၃၀)မှ – (၃) နာရီအတွင်း အနီရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီးထိုးပါ …။ ( ၁ ၊ ၉ ၊ ၃ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
တနင်္လာသားသမီးများ – လမ်းဘေးက ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ အင်္ဂါသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ …။ ကြာဇံကြော်စားပြီးထိုးပါ …။ တနင်္လာနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ – (၁၀)နာရီ (၃၀) အတွင်း နီညိုရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ …။ ( ၃ ၊ ၂ ၊ ၈ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
အင်္ဂါသားသမီးများ – မီးဖိုခန်းထဲမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ ကြာသပတေးသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ …။ ကော်ဖီသောက်ပြီးထိုးပါ …။ အင်္ဂါနေ့(၃)နာရီမှ – (၄)နာရီ(၃၀)အတွင်း အဝါရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ …။ ( ၅ ၊ ၀ ၊ ၇ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ -အိမ်တံခါးအနီးမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် … ။ စနေသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ …။နန်းကြီးသုပ်စားပြီးထိုးပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီ(၃၀) မှ – (၁၂)နာရီအတွင်း အနက်ရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ …။( ၇ ၊ ၄ ၊ ၈ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
ကြာသပတေးသားသမီးများ – ကားတစ်စီးရဲ့ ကားနံပါတ်ပြားမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ တနင်္လာသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ …။ ခေါက်ဆွဲကြော်စားပြီးထိုးပါ …။ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ (၄)နာရီ(၃၀) မှ – (၆) နာရီအတွင်း အဖြူရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ …။ ( ၂ ၊ ၇ ၊ ၉ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
သောကြာသားသမီးများ – ရေချိုးတဲ့နေရာ ၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် …။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ …။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲစားပြီးထိုးပါ …။ သောကြာနေ့ နေ့လည်(၁၂)နာရီ – (၁)နာရီ (၃၀)အတွင်း အစိမ်းရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ … ။ ( ၄ ၊ ၁ ၊ ၂ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
စနေသားသမီးများ – သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် ။ သောကြာသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ .။ အုန်းသီးပါတဲ့မုန့်စားပြီးထိုးပါ .။ စနေနေ့ နံနက် (၇)နာရီ (၃၀) မှ – (၉)နာရီအတွင်း အပြာရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ …။ ( ၆ ၊ ၄ ၊ ၃ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
မိတ်ဆွေများအားလုံး အောင်ဘာလေထီဆုကြီးများ ရယူပိုင်ဆိုင် ဆွတ်ခူးနိုင်ကြပါစေ …။
မိုးသားတိမ်လိပ်များ ၊ အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေများ ၊ မိုးစက်မိုးပေါက်များကြောင့် ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းလှသော မိုးဦးကာလ ဇူလိုင်လ၏နေ့ရက်များ
၂၀၂၀ ဇူလိုင္လအတြက္ ေန႔သားအလိုက္ အက်ိဳးေပး ေအာင္ဘာေလထီဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ထီထိုးရမည့္အခ်ိန္အပိုင္းအျခား
” ထီထိုးတဲ့သူတိုင္း ထီေပါက္ကိန္း႐ွိသည္ ”
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား – အိမ္ရဲ႕ဧည့္ခန္းမွာ ထီေပါက္ဂဏန္း႐ွိေနပါတယ္ …။ တနဂၤေႏြသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ၿပီးထိုးပါ …။ ၾကက္ဥေၾကာ္စားၿပီးထိုးပါ …။ တနဂၤေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီ(၃၀)မွ – (၃) နာရီအတြင္း အနီေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီးထိုးပါ …။ ( ၁ ၊ ၉ ၊ ၃ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ႐ွာၿပီးထိုးပါ …။
တနလၤာသားသမီးမ်ား – လမ္းေဘးက ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုမွာ ထီေပါက္ဂဏန္း႐ွိေနပါတယ္ …။ အဂၤါသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ၿပီးထိုးပါ …။ ၾကာဇံေၾကာ္စားၿပီးထိုးပါ …။ တနလၤာေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ – (၁၀)နာရီ (၃၀) အတြင္း နီညိဳေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၃ ၊ ၂ ၊ ၈ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ႐ွာၿပီးထိုးပါ …။
အဂၤါသားသမီးမ်ား – မီးဖိုခန္းထဲမွာ ထီေပါက္ဂဏန္း႐ွိေနပါတယ္ …။ ၾကာသပေတးသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ၿပီးထိုးပါ …။ ေကာ္ဖီေသာက္ၿပီးထိုးပါ …။ အဂၤါေန႔(၃)နာရီမွ – (၄)နာရီ(၃၀)အတြင္း အဝါေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၅ ၊ ၀ ၊ ၇ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ႐ွာၿပီးထိုးပါ …။
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား – အိမ္တံခါးအနီးမွာ ထီေပါက္ဂဏန္း႐ွိေနပါတယ္ … ။ စေနသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ၿပီးထိုးပါ …။ နန္းႀကီးသုပ္စားၿပီးထိုးပါ …။ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီ(၃၀) မွ – (၁၂)နာရီအတြင္း အနက္ေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၇ ၊ ၄ ၊ ၈ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ႐ွာၿပီးထိုးပါ …။
ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား – ကားတစ္စီးရဲ႕ ကားနံပါတ္ျပားမွာ ထီေပါက္ဂဏန္း႐ွိေနပါတယ္ …။ တနလၤာသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ၿပီးထိုးပါ …။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္စားၿပီးထိုးပါ …။ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန (၄)နာရီ(၃၀) မွ – (၆) နာရီအတြင္း အျဖဴေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၂ ၊ ၇ ၊ ၉ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ႐ွာၿပီးထိုးပါ …။
ေသာၾကာသားသမီးမ်ား – ေရခ်ိဳးတဲ့ေနရာ ၊ ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ ထီေပါက္ဂဏန္း႐ွိေနပါတယ္ …။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ၿပီးထိုးပါ …။ ေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲစားၿပီးထိုးပါ …။ ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္(၁၂)နာရီ – (၁)နာရီ (၃၀)အတြင္း အစိမ္းေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ … ။ ( ၄ ၊ ၁ ၊ ၂ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ႐ွာၿပီးထိုးပါ …။
စေနသားသမီးမ်ား – သတင္းစာတစ္ေစာင္ထဲမွာ ထီေပါက္ဂဏန္း႐ွိေနပါတယ္ …။ ေသာၾကာသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ၿပီးထိုးပါ …။ အုန္းသီးပါတဲ့မုန္႔စားၿပီးထိုးပါ …။ စေနေန႔ နံနက္ (၇)နာရီ (၃၀) မွ – (၉)နာရီအတြင္း အျပာေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၆ ၊ ၄ ၊ ၃ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ႐ွာၿပီးထိုးပါ …။
မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ေအာင္ဘာေလထီဆုႀကီးမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ …။
မိုးသားတိမ္လိပ္မ်ား ၊ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလမ်ား ၊ မိုးစက္မိုးေပါက္မ်ားေၾကာင့္ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ မိုးဦးကာလ ဇူလိုင္လ၏ေန႔ရက္မ်ား
ကနီမြို့နယ် ဝရာကျေးရွာမှ ကားသမားတစ်ဦး ထီသိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးဆွတ်ခူး
July 1, 2020 by Shwengwe Games
ယနေ့ထွက်ရှိသော ၁၇ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ၏အမြင့်ဆုံး သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့နယ် ဝရာကျေးရွာရှိ ကားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူကိုသောင်းထိုက်လင်းမှ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်ခဲ့သော ည- ၈၅၃၀၉၅ ထီလက်မှတ်အား မုံရွာမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ရဲတိုက်တန်းရှိ အောင်ဆုထူးပိုင် ထီဆိုင်မှ ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထီဆိုင်ရှင် ကိုစိုးဝင်း ကပြောသည်။
“ကျွန်တော်ပေါက်တယ် ထင်ကြတာ၊ ဆိုင်ကဝန်ထမ်းကောင်မလေးရဲ့အစ်ကိုပေါက်တာပါ။ ဒီကိုလာရင်းထီထိုးနေကြပါ။အခုသူကခရီးလွန်နေလို့ လှမ်းတော့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်” ဟု၎င်းကပြောသည်။
မုံရွာမြို့အောင်ဆုထူးပိုင်ထီဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုစိုးဝင်းသည်ယခင် သိန်းတစ်သောင်းအမြင့်ဆုံးဆုချီးမြှင့်စဉ်က ပေါက်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပြီး ယခုအကြိမ်တွင်လည်း ၎င်းပေါက်သည်ဟုဆိုကာ လူမှုကွန်ရက်တွင် သတင်းများပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
#MonywaGazette #ထီ #သိန်းတစ်သောင်းခွဲ #အောင်ဆုထူးပိုင်
ကနီၿမိဳ႕နယ္ ဝရာေက်း႐ြာမွ ကားသမားတစ္ဦး ထီသိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုႀကီးဆြတ္ခူး
ယေန႕ထြက္ရွိေသာ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီ၏အျမင့္ဆုံး သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကနီၿမိဳ႕နယ္ ဝရာေက်း႐ြာရွိ ကားသမားတစ္ဦးျဖစ္သူကိုေသာင္းထိုက္လင္းမွ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။
သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲေပါက္ခဲ့ေသာ ည- ၈၅၃၀၉၅ ထီလက္မွတ္အား မုံ႐ြာၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ရဲတိုက္တန္းရွိ ေအာင္ဆုထူးပိုင္ ထီဆိုင္မွ ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထီဆိုင္ရွင္ ကိုစိုးဝင္း ကေျပာသည္။
“ကြၽန္ေတာ္ေပါက္တယ္ ထင္ၾကတာ၊ ဆိုင္ကဝန္ထမ္းေကာင္မေလးရဲ႕အစ္ကိုေပါက္တာပါ။ ဒီကိုလာရင္းထီထိုးေနၾကပါ။အခုသူကခရီးလြန္ေနလို႔ လွမ္းေတာ့ အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။
မုံ႐ြာၿမိဳ႕ေအာင္ဆုထူးပိုင္ထီဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုစိုးဝင္းသည္ယခင္ သိန္းတစ္ေသာင္းအျမင့္ဆုံးဆုခ်ီးျမႇင့္စဥ္က ေပါက္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ၿပီး ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း ၎ေပါက္သည္ဟုဆိုကာ လူမႈကြန္ရက္တြင္ သတင္းမ်ားပ်ံ့ႏွံ႕ခဲ့သည္။
#MonywaGazette #ထီ #သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ #ေအာင္ဆုထူးပိုင္
(၁၇) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စ , ဆုံးတိုက်လို့ရပါပြီ
July 1, 2020 July 1, 2020 by Shwengwe Games
(၁၇) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စဆုံးတိုက်လို့ရပါပြီ
သိန်း ၁၅၀၀၀. ည ၈၅၃၀၉၅
သိန်း ၁၀၀၀၀. ဖ ၇၈၇၃၅၄ မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀၀. ဃ ၈၄၇၉၃၀
သိန်း ၅၀၀၀. ဓ ၄၀၆၈၂၀ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀၀. ဍ ၆၀၈၃၁၉.
သိန်း ၁၀၀၀. ဝ ၁၂၀၃၆၄.
သိန်း ၁၀၀၀. ကဃ ၈၉၈၃၅၀
သိန်း ၁၀၀၀. ဌ ၁၄၄၁၆၅
သိန်း ၁၀၀၀. ယ ၅၅၄၅၉၀
သိန်း ၁၀၀၀. ဆ ၃၅၆၉၁၀. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀၀. ဂ ၃၉၄၃၂၅. မိုးယံ
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်းဆုများ
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၅ သောင်းဆုများ
သိန်း ၅၀၀. ဋ ၃၁၃၇၉၆. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ဈ ၆၂၀၆၆၀. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ဠ ၆၄၇၂၂၃.
သိန်း ၅၀၀. ဍ ၃၂၇၂၅၂. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ဟ ၅၄၉၅၇၃. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ရ ၄၇၇၆၉၃. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ကဂ ၇၅၉၃၂၇. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ဏ ၄၁၀၀၃၄.
သိန်း ၅၀၀. ထ ၈၄၈၀၀၈.
သိန်း ၅၀၀. ပ ၄၆၀၂၂၉. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. တ ၃၉၂၆၀၁
သိန်း ၅၀၀. ရ ၁၁၇၀၁၂. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ဓ ၇၁၂၀၀၅
သိန်း ၅၀၀. ဆ ၉၆၄၃၃၇.
သိန်း ၅၀၀. ဍ ၃၆၇၀၆၁. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ဇ ၃၂၉၃၂၇
သိန်း ၅၀၀. ဝ ၈၂၉၀၃၀. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀. ဗ ၇၀၀၈၆၅. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. မ ၃၇၃၉၁၆. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. ဌ ၆၀၇၁၇၅. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. ဏ ၆၈၂၅၆၂
သိန်း ၂၀၀. ဎ ၄၀၇၂၆၁. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. ဇ ၇၅၁၈၇၃
သိန်း ၂၀၀. ခ ၈၃၉၉၈၂. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. ဇ ၇၅၄၅၂၁
သိန်း ၂၀၀. ထ ၂၀၁၂၄၅. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. မ ၄၆၃၃၃၁. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. ဆ ၁၉၁၃၈၁
သိန်း ၂၀၀. ဒ ၈၄၂၅၂၉.
သိန်း ၂၀၀. ဋ ၆၁၆၈၁၇. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. ဖ ၄၅၁၀၂၄.
သိန်း ၂၀၀. သ ၆၅၇၆၅၃.
သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၂၀၀၇၆၈. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. န ၈၅၅၅၆၉.
သိန်း ၂၀၀. ည ၄၁၅၉၇၂. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. အ ၆၃၅၂၆၁. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၅၉၆၀၁၄.
သိန်း ၁၀၀. ယ ၇၃၆၈၄၈.
သိန်း ၁၀၀. ဗ ၉၉၇၆၁၀. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀. ပ ၆၅၁၄၅၇.
သိန်း ၁၀၀. ယ ၇၅၀၀၀၈.
သိန်း ၁၀၀. ဗ ၇၈၉၂၁၈.
သိန်း ၁၀၀. ဈ ၃၇၃၉၉၂. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀. ဟ ၈၁၂၈၄၄.
သိန်း ၁၀၀. သ ၄၈၀၂၃၂. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀. ကင ၇၈၇၃၄၅. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀. ဘ ၅၉၉၀၀၅
သိန်း ၁၀၀. ခ ၃၉၉၄၃၃. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀. ထ ၈၈၁၇၀၅
သိန်း ၁၀၀. ဟ ၃၉၉၈၅၃.
သိန်း ၁၀၀. ကစ ၅၇၃၄၁၈
သိန်း ၁၀၀. ဗ ၃၄၉၀၃၅.
သိန်း ၁၀၀. လ ၆၀၁၃၀၆.
သိန်း ၁၀၀. စ ၂၄၆၂၄၅
သိန်း ၁၀၀. ဆ ၂၉၂၃၂၁
သိန်း ၁၀၀. န ၈၁၅၀၀၈
သိန်း ၁၀၀. န ၇၉၉၄၅၆. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀. သ ၃၈၂၄၅၃
သိန်း ၁၀၀ ဠ ၃၃၃၁၆၉. မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀. င ၉၁၁၈၆၇
သိန်း ၁၀၀. စ ၈၂၃၂၃၄.
သိန်း ၅၀. ဖ ၆၉၇၈၇၂. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ကဂ ၄၃၂၀၈၈.
သိန်း ၅၀. ဈ ၄၉၃၈၆၆
သိန်း ၅၀. ကခ ၅၃၅၂၆၆
သိန်း ၅၀. ကင ၈၁၈၂၆၁
သိန်း ၅၀. ဒ ၅၂၃၅၁၇
သိန်း ၅၀. လ ၉၇၄၇၉၅. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ဂ ၇၂၈၅၂၀. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ကဂ ၁၄၀၃၃၅. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ဓ ၃၆၆၇၈၅. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ဗ ၆၆၄၂၂၅
သိန်း ၅၀. ကဃ ၇၀၆၀၉၆
သိန်း ၅၀. ဎ ၁၁၂၇၉၆. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. အ ၂၃၇၅၀၀. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ဘ ၁၈၁၆၅၃
သိနိး၅၀. ဆ ၅၃၈၆၈၉
သိန်း ၅၀. ဋ ၈၃၄၀၇၈
သိန်း ၅၀. ဓ ၃၂၁၈၁၄. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ဆ ၅၃၂၈၉၆.
သိန်း ၅၀. ဃ ၇၃၁၆၀၆. မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ဝ ၆၃၈၃၃၉.မိုးယံ
သိန်း ၅၀. ဈ ၄၂၀၉၄၁ မိုးယံ
(𝟏𝟕) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်
သိန်း ၁၅၀၀၀. ည ၈၅၃၀၉၅.
သိန်း ၁၀၀၀၀. ဖ ၇၈၇၃၅၄. မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀၀. ဃ ၈၄၇၉၃၀.
သိန်း ၅၀၀၀. ဓ ၄၀၆၈၂၀. မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀၀. ဍ. ၂၆၆၀၈၇
သိန်း ၂၀၀၀. မ ၈၁၈၅၄၉.
သိန်း ၂၀၀၀. ဌ ၃၂၀၀၁၈
သိန်း ၂၀၀၀. ဇ ၈၈၇၅၁၀
သိန်း ၂၀၀၀. ဝ ၅၇၉၁၉၇.
သိန်း ၁၀၀၀. ကဃ ၈၉၈၃၅၀.
သိန်း ၁၀၀၀. ယ ၅၅၄၅၉၀.
ကျန်ရှိတဲ့ ဆုမဲများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်
ပေါက်နှုန်း နည်းသော အောင်ဘာလေထီနှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် အားပေးခွင့်မရှိသော ပြည်သူများ
June 3, 2020 by Shwengwe Games
“Probability”ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေသဘောတရား ရာခိုင်နှုန်းဟူသည့် သချၤာသဘောတရားကိုအလယ်တန်း ကျောင်းသားဘဝကတည်းကလူတိုင်းကိုယ်စီသင်ကြားခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ခြောက်မျက်နှာရှိတဲ့အန်စာတုံးတစ်တုံးကို လှိမ့်လိုက်ရင်တစ်ဂဏန်းကနေ ခြောက် ဂဏန်းအထိဂဏန်းခြောက်လုံးစလုံးဟာ ကျနိုင်ခြေအညီအမျှရှိပါတယ်။တစ်ဂဏန်း ဖြစ် နိုင်ချေ ၁၆.၆၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိသလို ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ ဖြစ်နိုင်ချေကလည်း ၁၆.၆၇ ရာခိုင် နှုန်းအသီးသီး အညီအမျှရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ နှစ်လုံးထီမှာ ၀၀ ကနေ ၉၉ အထိ ဂဏန်းအလုံးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ပဲရှိတဲ့အတွက်ဂဏန်းတစ်လုံးထဲထီထိုးထားရင်တောင်မှထီပေါက်နိုင်ခြေတစ်ရာခိုင်နှုန်းကြီးများတောင်မှရှိပါတယ်။ ဘယ်ဂဏန်းဖြစ် ဖြစ်ပါ။လေးငါးလုံးထိုးထားရင်ထီပေါက်နိုင်ခြေ ၄.၅ %ရာခိုင်နှုန်း အထိတက်လာပြီးထီပေါက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်းများလာပါတယ်။
သို့သော်လည်းဂဏန်းသုံးလုံးရှိတဲ့ ချဲထီ မှာတော့ (၀၀၀) သုည သုံးလုံးကနေကိုးသုံးလုံး (၉၉၉) အထိဂဏန်းပေါင်းတစ်ထောင်ရှိလာတဲ့အတွက်ဂဏန်းတစ်လုံးကိုထီထိုးထားမယ်ဆိုရင် ထီ ပေါက်နိုင်ခြေ Probabilityက ဝ.၁ ရာခိုင်နှုန် ပဲရှိပါတော့တယ်။ထီဂဏန်း ၁၀ လုံးထိုးထားမှ ထီပေါက်နိုင်ခြေ ၁ ရာ ခိုင်နှုန်းပဲရှိတော့တဲ့အတွက်ထီပေါက်ဖို့ အလားအလာနည်းလာပါတယ်။ဂဏန်းနှစ်လုံးထက်ဂဏန်းသုံးလုံးကထီပေါက်ဖို့ပိုပြီး ခက် ခဲလာပါတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေကအောင်ဘာလေလိုအစိုးရထီတွေမှာ ဂဏန်း ၆ လုံးပဲရှိတဲ့အတွက် ၀၀၀,၀၀၀ ကနေ ၉၉၉,၉၉၉ အထိ ဆိုရင် ဂဏန်းအလုံးရေတစ်သန်း၊ထီအစောင်ရေတစ်သန်းပဲရှိပါတယ်။ ထီတစ်စောင်ထိုးထားရင်တစ်သန်းမှာတစ်စောင်ထီပေါက်နှုန်းဖြစ် တာမို့ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဝ.၀၀၀၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိတာမို့ သိပ်မဆိုးလှပါဘူး။မြန်မာ့အောင်ဘာလေထီမှာကျတော့ပြည်သူတွေကို စေတနာမထားလိုက်ပုံကဂဏန်းခြောက်လုံးရှေ့မှာ အက်္ခရာ ၄၀ လုံးကိုထပ်ထည့်ပါတယ်။စုစုပေါင်းထီဂဏန်းအလုံးရေအကြမ်းဖျင်း ၄၀ သန်း၊ထီစောင်ရေ ၄၀ သန်းအထိ ဖောင်းပွများပြားလာပါတယ်။၄၀ သန်း မှာ တစ် စောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ထီပေါက်ဖို့ ၄၀ ဆပိုမိုပြီးခက်ခဲသွားပါပြီ။ထွက်လာတဲ့ ထီပေါက်မဲ ကရောင်းမကုန်တဲ့ထီလက်မှတ်ထဲက ဖြစ်နေလို့၊ပယ်တဲ့အထဲကဖြစ်နေလို့အစားထိုးဆုမဲပြန်ပြန်နှိုက်နှိုက်နေရတာလည်း စနစ်မကျ ပုံစံမကျမမှန်ကန်ပြန်ပါဘူး။
ထီကိုတစ်စောင်တည်းထိုးချင်ရင်လည်းလုံးဝမလွယ်ပါဘူး။ သုံးစောင်တွဲ၊ ငါးစောင်တွဲ၊ဆယ်စောင်တွဲ၊ ထီအစောင်ရေ ၃၀၊ ၄၀ ကျော်ပါတဲ့မင်္ဂလာစုံတွဲဆိုပြီးဂျင်းထည့်ခံရပြန်ပါတယ်။ ပေါက်မဲဆုကြီးဆိုတာထီလက်မှတ်တစ်စောင်ချင်းစီနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်ထီကိုတစ်စောင်တည်းထိုးဖို့ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာမလွယ်ကူပါဘူး။ငါးစောင်တွဲ၊ဆယ်စောင်တွဲစသဖြင့် ထီရောင်းတဲ့ထီသည်တွဲချင်သလို တွဲထားတာတွေကို လိုက်ထိုးနေ ရပါတယ်။လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်အပြည့်အဝမရဘဲကန့်သတ်ထားတဲ့ရွေးချယ်ခွင့်သာရပါတယ်။ထီသည်တွဲထားတဲ့ ဆယ်စောင်တွဲစတဲ့ အထဲကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ထီတစ်စောင်တည်း ရွေးထိုးချင်တယ်ဆိုရင်ထီသည်ကမကြိုက်ပါဘူး။သူတွဲထားတဲ့အတွဲ ပျက် သွားတာကိုး။
ဒါပေမဲ့ငါးစောင်တွဲ၊ ဆယ်စောင်တွဲ ဘယ်လိုပဲထိုးပါစေ သူများနိုင်ငံထက်ထီပေါက် ဖို့အဆ ၄၀ လောက်ပိုပြီး ခက်ခဲနေ တာပါပဲ။သူများနိုင်ငံရဲ့ထီတစ်စောင်ပေါက်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်းကိုမီချင်ရင် ထွက်သမျှအက်္ခရာ ၄၀ လုံးထွက်ရင် ထီအစောင် ၄၀၊ အက်္ခရာ ၅၀ ထွက်ရင်ထီအစောင် ၅၀ လိုက်ထိုးမှသာ တူညီနိုင်၊ မီနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ လူဦး ရေ ၅၅ သန်းမှာ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း ကမိခင်နဲ့ကလေးတွေလို့ဆိုတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ၃၃.၃၅ သန်းဟာမိခင်နဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပြီး ၂၁.၆၅ သန်းသာ လျှင် အရွယ်ရောက်ပြီးလူကြီးများ၊ယောက်ျားများလို့ယူဆရပါမယ်။အိမ်ထောင်ဦးစီးနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားပျိုပျိုအိုအို ယောက်ျား ၂၁ သန်းကျော်မှာအောင်ဘာလေထီအစောင်ရေက ၄၄ သန်းဝန်းကျင်ပါ။ကံကိုအားမကိုးလို့၊ ကံမကောင်း တတ်လို့ ထီမထိုးဘူးဆိုတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပါ။ဒါကြောင့်ထီလက် မှတ်တွေလစဉ်ရောင်း မကုန်တာ၊ပိုလျှံနေတာဟာ မထူးဆန်းပါဘူး။
လူဦးရေ ၇ သန်းရှိတဲ့စင်ကာပူမှာအစိုးရထီဟာ ဂဏန်းခြောက်လုံး၊စောင်ရေ တစ်သန်းပဲထုတ်ပါတယ်။လူဦးရေ သန်း ၇၀ လောက်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဂဏန်းခုနစ်လုံး၊ စောင်ရေ ၁၀ သန်းပဲထုတ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ၅၅ သန်းမှာ စောင်ရေ ၁၀ သန်း၊ဂဏန်းခုနစ်လုံးဆိုရင်တောင်မှ လွန်ချင်ချင်ဖြစ်နေ ပါပြီ။ အက်္ခရာတွေထပ်ထည့်ပြီးထီကစားတာဟာတရားလွန်ပါ တယ်။ထီရောင်းရငွေကျပြန်တော့ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ တစ် ဝက်လောက်က ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအစိုးရကယူပါတယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့ ထီဆုတွေ၊ ဆုငွေလာမထုတ်တဲ့ထီလက်မှတ်တွေကလည်း တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာသိန်းပေါင်းသောင်းချီ သိမ်းယူရ ပြန်ပါတယ်။တကယ် ကတော့အခွန်ကောက်သလို ၁၅-၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အစို းရကယူပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကိုဆုကြေးအဖြစ် ချီးမြှင့်သင့်ပါတယ်။အခုတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချဖို့လိုအပ် နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာအစိုးရကအမြတ်ကြီးစားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဆုကြေးတွေကိုလည်းခေတ်ကာလနဲ့အညီပြောင်းလဲရမှာပါ။ ကလေးကလားကျပ်ငွေငါးသောင်းဆု(ဒေါ်လာ ၃၀) တော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ငါးသောင်းဆုပေါက်လို့နီးစပ်ရာထီဆိုင်မှာ ပြန်ရောင်းရင်ထီဆိုင်ကလမ်းစရိတ်သုံးလေးငါးထောင် ဖြတ်တဲ့ အတွက်ထီပေါက်သူက မစို့မပို့ငွေကလေး ၄၅,၀၀၀ လောက်ပဲရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆုကြေးထုတ်ပေး ရာဌာနကို လာဖို့ဆိုတာကလည်းအချိန်ရောငွေပါကုန်တာမို့ငါးသောင်းဆုနဲ့တော့ မလာကြတာများပါတယ်။တကယ်တော့ ခုခေတ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပုံအရဆိုရင်အနိမ့်ဆုံးဆုကြေးဟာငါးသိန်းဆုလောက်ဖြစ်ရမှာပါ။ငါးသောင်းဆု ဆုပေါင်းတစ်သိန်းအစားငါးသိန်းဆုစောင်ရေ ၅,၀၀၀ ဆိုတာမျိုးစသည်ဖြင့်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အိတ်ထဲကပိုက်ဆံထုတ်ပေးရတာမဟုတ်ဘဲခေတ်အဆက် ဆက်အောင်ဘာလေထီဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြည်သူတွေ အပေါ် တာဝန်မကျေခဲ့၊စေတနာမထားနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ထီပေါက်ဖို့ အက်္ခရာတွေနဲ့ခက်ခဲအောင်လုပ်ရုံသာမက ၂၀၀ တန်ထီလက် မှတ်ကို ၂၀၀ နဲ့ထိုးနိုင်အောင်၊ ၅၀၀ တန်ထီလက်မှတ်ကို ၅၀၀ နဲ့ထိုးနိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ချဲထီကိုတရားမဝင်၊မကောင်းပြောပြီး ချဲထီထက်အမြတ်ကြီးစားနေတာ၊ဆိုးနေတာအောင်ဘာလေထီဖြစ်နေပါတယ်။ထီရောင်းကောင်းတဲ့လကျပြန်တော့ထီစောင်ရေကုန်ရင်ကုန်သလို အက်္ခရာသစ်တွေထပ်တိုးပြီး အက်္ခရာ ၅၀ ကျော်အထိထပ်ပြီးရိုက်ထုတ်ရောင်းစားပါသေးတယ်။အဲဒီတော့ထီပေါက်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးကျဆင်းလာပါတယ်။သန်း ၄၀ မှာတစ်စောင်ရမယ့်ထီဆုကြီးတွေဟာသန်း ၅၀ မှာတစ်စောင်ဆိုတာမျိုး ဖောင်းပွလာပါတယ်။
ကိုုယ့်အိတ်ထဲကပိုက်ဆံမပေးရဘဲနှင့်ပြည်သူတွေအပေါ် စေတနာနည်းပါးလွန်းတယ်လို့အောင်ဘာလေထီဌာနက တာဝန်ရှိ လူကြီးတွေကိုထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံကြီးတွေကအစိုးရတွေရပ်တည်လည်ပတ်နေတာဟာအခွန်ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ထီဆိုတဲ့လောင်းကစားကငွေရှာပြီးအစိုးရအဖွဲ့လည် ပတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာအတွက်ဆိုသော်လည်းကစားပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ မျှမျှတတ “Fair Play”ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူက ထီနည်းစနစ်တွေကိုလေ့လာအတုယူကြဖို့၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အောင် ဘာလေထီဌာနကတာဝန်ရှိသောလူပုဂ်္ဂိုလ်များကို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။